Manchester | SASCA Manchester
Taageero waa u diyaar daryeelayaasha
June 9, 2015 dave porter Somali language version stories	Africa, carers, Health, Manchester, sasca, Somali, Somalia
Inaad caawiso ama aad xanaaneeyso qof qaraabadaada ah, saaxiibkaa ah ama derisba aa tihiin waa wax inteena badan caadi u ah, haddana dadbeey shaqo buuxda ah u tahay.
Hadaba cilmi baaris u sameeyay urrurka SaSCa aya waxa lagu ogaaday in dadka wax daryeelaa ee Soomaalida ah ay u nugul yihiin cudurka isku buuqa (depression).
dhamaadkii sannadkii hore ayaa howlwadeenada urrurka SaSCa iyo mutadawaciin ay kaashanayaan ay sameeyeen cilmi baaris ku saabsan dhibaatooyinka soo wajaha dadka wax daryeelayaasha Soomaalida. Xog-urrurintaa ayaa dadkii la waraystay waxa lagu weeydiiyay adeegyada ay u fidiyaan dadka ay daryeelaan iyo caqabada ay la kulmaan.
“inkastoo aanan wax dhiba u arag inan aabaheey xanaaneeyo, hooyadeeyna u adeego,hadana waa ay ku adagtahay inaan u socdaalo meela kale mas’uuliyada iga saaran howlaha guriga aawadeed.” Sidaa waxaa tiri nadiya abu oo ka mid ah dadkii lagu wareystay xog-urrrurintan.
Sidoo kale Majida oo iyana ka mid ah dadkii ka qeybqaatay cilmibaaristan ayaa tilmaantay in dad badan oo ax xanaaneeyaa ay iska indha tiraana daryeelista caafimaadkooda, taasoo wax u
dhinta fayoqabkooda, mid maskaxeed iyo mid jireedba, isla markaana ay qaarkood qabaan cudurada walwalka iyo isku buuqa.
Cilmibaaristan ayaa daaha ka rogeysa in qaarka mid ah xanaaneeyaasha Soomaalida ay ku adkaatay isku miisaamida nolosheeda bulsheed iyo tan shaqadooda, taas u keentaa in ay ka go doomaan
bulshada inteeda kale. halka kuwa kalena ay had iyo jeer ka cawdaan daal joogta ah hurda la’aan.
Qaar ka mid ah xanaaneeyaasha ayaa walwal ka muujiyay tabbabar la’aanta haysata iyo inaanay garaneeyn cid ay u sheegtaan baahidooda. Warbxintan oo taabaneysa arrimaha
iyo kuwa kalebe ayaa la soo bandhigi doona dhawaan, taasoo macluumeedkeeda lagala xirriiri karo ciwaanadan: SaSCa at info@sasca.org.uk or 0161 227 7966.
Ku soo dhawow gacmo furan
June 9, 2015 dave porter Somali language version stories	Africa, community, football, Manchester, News, sasca, Somali, Somalia
Way fududahay in aad arko ama ogaato sababta Farah Caddow uu ururka Sasca ugu aqoonsaday in uu yahay mid ka mid ah haldoorka u adeegayaasha bulshada.
Faarax oo ah aabaha labbo caruur ah ayaa u huray bulshadiisa inuu si mutadawacnimo ah ugu shaqeeyo una taageero, isagoo toddobaadkii labbo maalmood ka howlgala xarunta ururka Sasca ee ku taal wadada Princess Road ee magaalada Manchester
Faarax oo ka waramaya sida uu arko shahaadada lagu maamuusay iyo howlaha uu ka qabto xarunta Sasca, ayaa yidhi; “Helitaanka shahaadosharaf waa mid aad qiimo u leh marka aad ku hesho ama lagugu citiraafo taageerada aad bulshadaada u fidisay. Waxa jira dad badan oo waayeel ah oo xarunta Sasca yimaad luuqada ingiriisuguna ku adag tahay ama kumbuyuutarka aan isticmaali Karin sidaasidarteed waxaan ka caawinaa arrimo badan oo ay ka mid ka yihiin; wicista xafiisyada dowlda, shaqo raadinta, balamaha iyo waxkasata oo caawimaad ah oo ay u baahan yihiin.
Iyada oo la siiyo telefoon lacag la’aan ah iyo soo dhawayn diiran.”
Wax ka baro dhaqanka wanaagsan ee soomaalida
June 9, 2015 dave porter Somali language version stories	Africa, community, Culture, Manchester, sasca, Somali, Somalia
UJEEdooyInKa warsidaha SaSCa waxaa ka mid ah in lagu baraarujiyo bulshada Soomaaliyeed lana barro da’yarta dhaqanka suuban ee umaddeena qormadeena maanta waxa aanu idiinku soo
gudbineeyna war-bixin si qoto dheer uga waramaysa qaamiha uu marti-soorku ku leeyahay dhaqanka soomaalida oo uu wargeyska siiyey mid ka mid ah waayo araga Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Manchester oo lagu magacaabo Xaaji Cabdi Gurey.
Waxa dhaqan u ah ummada Soomaaliyeed inay si fiican u soo dhaweeyaan sooraana martida lalana wadaagaan wax walba oo markaa reerka loo soo martiyay ay heli karaan.
Mararka qaar waxa dhacda in qof ku soo martiyay iyadoo xilligu uu aad u kulul yahay, lagu jiro abaar, xooluhuna ay gudhanyihiin, iyadoo taasi jirto ayaa hadana waxaa waajib ku ah reerka la soo martiyay inay sooraan soona dhaweeyaan dadka safarka ah ee maciinka soo biday.
Xaaji Abdi Gurey
Caadiyan reeraha miyiga degan waxa had iyo jeer soo martiya qof safara oo wadadii ka ambaday ama meesha reerku degan yahay maraya. Martidaasina waxay isugu jiri karaan dad xoolo lumay raadinaya, dad safar dhul dheer ku socda oo reerkaa habeenka u hoyana iyo macaalimiinta qur’aanka doonaya ineey reerahaa baraan. Inaad martidaa ku soo magangashay aad si fiican u marti soortaa goorteey doontaba hakuu yimaadaane waa arrin aad u wanaagsan oo bulshada soomaaliyeed ay ka simantahay meeleey joogtaba.
nolosha dadka reer miyiga ahi had iyo jeer waxa ay ka dharagsanyahiin in xili kasta dad safarka ama marti ah ay u imankaraan sidaasi daraadeed waxa ay iska xil-saaraan sidii ay magacooda iyo
sharaftooda ay u ilaashan lahaayeen oo aanay bulshada ugu dhex ceeboobi lahayn.
Haddii reerku leeyahay geel waxa martida loo qoondeeyaa hal ama labbo halaad oo irmaan si martida loogu deeqo caano, mararka qaarkoodna haddii uu reerku ladan yahay waxa ay martidaa ku sooraan ama u qalaan neef adhiya ama geela hadba inta aay tirada dadka soo martiyay ay leegyihiin. Xataa hadii uu xiligu xunyahay waxaa waajib ah oo martida la sooro oo la soo dhaweeyo ayadoon loo eegayn qabiilka ama xataa hadii labada reerahoodu colyihiin.
Waxa ay ahayd mid ceebka weyn ku ah dhaqanka Soomaaliyeed in aan la soo dhaweyn ama la soorin qofka safarka ah. Qoyska ama reerka ku kaca falkan fooshaxun ee marti qadiya ama aan gogol u fidini waxa uu ahaa mid sheegan oo ku ceebooba bulshada dhexdooda, had iyo jeerna lagu hadal hayo gooba ayskugu yimaad, marka qaarna lagu xuso suugaanta oo gabo laga tiriyo.
Ka taxadir caafimaadkaaga
June 9, 2015 dave porter Somali language version stories	community, Health, Manchester, sasca, Somali
Ma jeceshahay aqristoow in lagaa caawiyo joojinta sigaarka, hurdo la’aanta ama aad u maareeyso walbahaarka oo aad u cuni laheeyd cunto caafimaad leh, isla markaana aad noqoto
qof firfricoon oo caafimaad qaba?
Haddii aad sidaa jeceshahay,urrurka SaSCa oo kaashanaya xeeldeerayaal dhinaca caafimaadka ah oo ku sugan magaaladan Manchester waxay kaa caawinkaraan arrimahaas oo dhan. Faa’idooyinka aad ka heleeyso inaad raashin wanaagsan cunto waxaa ka mid ah: Inay kaa yaraato qatarta cudurrada wadna xannunka, dhiig karka iyo kansarka. Islamarkaana aad u
dhinto culeeykaaga jireed aayna kuu hagaagaan maqaarka,cidiyaha iyo timahu.
Sidoo kale dhaqdhaqaaq jidheed ee qofku sameeyo waxa laga helaa faa’idooyin caafimaad oo ay ka mid yihiin: hoos u dhaca khatarta wadana xanuunka, dhiig karka, caylida, la dagaalanka saamaynta gabowga, furfurka seedaha, kala-goysyada iyo warwar iyo walaac la’aan.
Sidoo kale faa’iidooyinka laga helo sigaar joojinta ayaa ah in ay yaraato fursad cudurda ku dhaca sambabada, wadnaha, neef-mareenka iyo kansarka, islamarkaana ay keydsanto lacagta
sigaarka lagu iibsan lahaa.
Gasim Maxamed ayaa yidhi: “Haddii aad jeclaan lahayd caawimo iyo taageero dhinaca adeeg Tababaraha caafimaad ah waxaad la xidhiidhaa xarunta SaSCa, ka dibna iyaga ayaa kugu xidhi doona tababaraha caafimaadka oo aad kawada hadali doontaan nooca taageerada aad u baahan tahay iyo yoolka aad jecejashay inaad inaad gaadho.”
waxa kale oo aad kale xidhiidhi karataa telefoonadan
07792 917509 / 0161 636 7512.
Sasca oo ku howlan horumarinta danaha bulshada
June 9, 2015 June 9, 2015 dave porter Somali language version stories	Africa, community, Manchester, sasca, Somali, Somalia
Sanado badan oo waayo aragnimo ah ayaa waxeey u sahashay bulshada Soomaaliyeed ee Manchester inay hormuud u noqoto is dhaxgalka iyo nabada, taasoo aan ku koobneey oo kaliya Manchester, laakiin ay la wadaagaan dhamaan Soomaalida daafaha dunida ku nool.
SaSCa oo la aasaasay sanadkii 2007 ayna maamulaan dad Soomaaliyeed ayaa la shaqeeyn la leh golaha deegaanka ee Manchester iyo haya’ado badan oo ka howlgala magaaladan.
“SaSCa waxeey ku guuleeysatay inay aas aasto dalad ay ku mideeysanyihiin 6 urrur oo kajiray magaaladan Manchester iyadoo la eegayo danta bulshada Soomaalida.”
Saaxiibo iska uur fiyoow Maxamed Jeylani, (Bidix) guddoomiyaha SASCA iyo Xoghaya Guud ee SASCA , Mohamed Egeh
Sidaa waxaa yiri guddoomiyaha urrurka SaSCa Mohamed Jeilani. Waxaa kaloo uu Mr Jeilani sheegay in waxyaabaha uu urrurkiisu qabtay muddooyinkii u danbeeyay ay ka midyihiin
xogurrurin ku saabsaneeyd arrimaha la xirriira bulshada Soomaaliyeed ee Manchester sida: Waxbarashada, Caafimaadka iyo dhalinyarada, taasoo aay la kaashanayeen jaamacada Manchester Metropolitan University.
Mr jeilani oo ka hadlayay sida aay hoowlwadeenada urrurkiisu aay ugutaan shaqada xafiiska ayaa yiri: “xafiisku waxaa uu furrunyahay maalmaha shaqada, 10:00 am ka subaxnimo ilaa 2:00 pm
iyadoo bulshada looga caawinayo arrimaha la xirriira socdaalka iyo adeega bulshada oo dhan, sidoo kale xafiisku waxa uu furanyahay 5:00 pm ilaa 11:00 pm iyadoo odoyaasha soomaaliyeed ku
Sidoo kale Mohamed Egeh oo ah xoghayaha guud ee SaSCa ayaa waxa uu yiri: “Waxaan jeclahay inaan u adeego bulshada oo aan had iyo jeer wax u qabto, iskuna dayo inaan xaliyo wixii dhibaato ah ee jira intii awoodeeyda ah.”
Mr Egeh ayaa waxa kale uu sheegay ineey ka warhayaan inaaneey aheeyn Soomaalida oo kaliya dadka u baahan hoowlaha SaSCa aay qabato taasna waa sababta ayuu yiri aay SaSCa u go’aan satay ineey wax la qabato bulshooyinka kale ee Magaaladan ku nool. Marka laga reebo luqada Englishka shaqaalaha xafiiska SaSCa waxeey ku hadlaan luqado badan sida: Carabiga, Talyaaniga iyo Faransiiska. Mr Egeh ayaa ugu danbeeyntii sheegay inuu rajeeynayo in carruurtiisa aay iyagana mustaqbalka hoowshan sidii wadi doonan.
Mr jeilanu ayaa isagane rajeeynayo in hoowlahooda aay ku baahin doonaan dalka Soomaaliya mustaqbalka dhow.